Ihe mgbochi: oge ​​kachasị mma iji malite SEO
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ ọrụ weebụ nke chọrọ ịchọta ihe kasị mma na SEO, ị chọrọiji ghọta na usoro iheomume nke atụmatụ SEO gị na mmemme dị oke mkpa dị ka atụmatụ ma ọ bụ mmepụta onwe ha.
Ma ị na-eme nhazi ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-emegharị, oge kachasị mma ijimalite ime SEO tupu ị hapụ ya ka ị chọọ engines maka nhazi na ogo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọrụ SEO na mkpokọta weebụkwesịrị ịmalite n'otu oge.
Ụfọdụ akụkụ SEO pụrụ iche na ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ, ụfọdụ nwere ihe pụrụ icheredesigned na ebe nrụọrụ weebụ na ndị ọzọ na-emekarị ma ikpe abụọ. Nik Chaykovskiy, ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa atụmatụ nke ime SEO maka nzube dị iche iche.
SEO Maka weebụsaịtị ọhụrụ
Maka weebụsaịtị ọhụrụ, SEO ga-ejikọta ya na ntinye weebụ yana onye ọrụahụmahụ (UX). Nke a pụtara, usoro SEO ga-ekpebi ụdị ọdịnaya nke a ga-eji na ebe a ga-etinye yana ebe nrụọrụ weebụ. Ihe ịga nke ọma na SEO bụ, nke a, ntụgharị nke mgbalị a na-etinye iji dochie mkpokọta weebụ, UX, na SEO. Malite SEO n'ogeusoro mmemme weebụ na-eme ka ihe SEO pụta.
Otú ọ dị, nke a nwere ihe ọzọ metụtara azụmahịa gị: UX gị nandị ọkachamara nhazi weebụ ga-aghọta SEO na ụmụ SEO gị ga-aghọta UX na imewe weebụ. Ndị ọkachamara a nwere ike ịchọ ọzụzụ na anọebe ndị dị egwu (imewe, UX, mmepe ihu n'ihu, na SEO)..Ma, mgbalị ahụ bara ezigbo uru. Ọ ga-adịrị mfe nyochaa naohere nke ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ na-aga n'ihu na-arịwanye elu.
SEO Atụmatụ Maka weebụsaịtị Redesign
Ọ bụrụ na ị malitelarị na saịtị gị, ihe kacha mma ịmalite bụ bụSEO nyocha. Otu nyocha SEO na-enyere gị aka ịmara ike gị SEO, dị ka ibe ndị a na-ahọrọ oke site na engines ọchụchọ. Ị nakwamara ihe SEO na-eme ka akwụkwọ ahụ rụọ ọrụ nke ọma ka i wee nwee ike ịnọgide na-echekwa / chekwaa ma ọ bụ mee ihe ndị ahụ ka ị na-emegharịna ebe nrụọrụ weebụ.
Ihe dị mkpa n'oge mkpokọta weebụ na-edegharị bụ ịnwe atụmatụ redirect 301.Dika ihe gbanwere ochie URL, ndi mmadu ndi ozo kwesiri iji nlezianya kpogharia uzo gaa na URL ndi ohuru ka okporo ahia gaa na saịtịadighi-efu mgbe uzo ozo weghaghariri na oru zuru oke. Ọ ga - abụ, ma ọ bụ maka azụmahịa ole na ole, na-egbu egbu maka azụmahịama ọ bụrụ na echefuwo akụkụ SEO a. Cheedị ihe ga - eme ma ọ bụrụ na "ndị na - eleta saịtị gị" 404 - Page Not Found "error whenha gbalịrị ịbanye na ibe weebụ gị.
SEO Bụ Ọrụ Na - aga n'ihu
Maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ na ndị edegharịrị, SEO bụ ọrụ na-aga n'ihu.N'ime oge ikuku na-eme ngwa ngwa, ọtụtụ n'ime akụkụ SEO gbanwere n'oge obere oge. N'otu oge ị ga-achọtinye ihe SEO na-agbakwunye na n'oge ọzọ ịmepụta ọdịnaya gị dịka ọ dị ugbu a. Enweghị ike ịpịgharịa na SEOihe ndị a ga - abụ ọnwụ ọnwụ nke azụmahịa, karịsịa ma ọ bụrụ na ahịa na - adabere na mgbasa ozi dijitalụ.
Mara ụzọ kwesịrị ekwesị SEO ga - ewe ugbu a iji mee atụmatụ SEO naweebụsaịtị na-aga nke ọma. Ọ bụrụ na saịtị gị na-agba ọsọ, na-arụ ọrụ ọkachamara SEO ma jide n'aka na a ga-emecha SEO nyocha. Nke abụ ụzọ kachasị mma ịmara ihe omume kacha mma gị na ebe nrụọrụ weebụ gbasara SEO ịga nke ọma. Ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ maka ịmepụta saịtị ọhụrụ,tinye aka gi SEO site na mmalite. SEO mere n'oge mmalite nke mmepe weebụ na-enyere aka izere nsogbu ndị SEO naọdịdị nke saịtị ahụ nke nwere ike imefu oge na ego gị n'ọdịnihu Source .